အသုံးပြုသူ:Dhawell.hlugalay - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီကီပီးဒီးယားကို ပါဝင်လုပ်အားဒါနပေးဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တာ ၂၀၀၁ကတည်းကနေစခဲ့တာ တကယ်ဖြစ်မြောက်တာ ၁၉-နှစ်အကြာ ၂၀၂၀မှပဲ အကောင်အထည်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးမှာတော့ ကျနော်ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ အဓိကကျတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်များနောက်ကွယ်မှာ ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ ရှင်းပြချက်တွေကို ဖေါ်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင် စကားပြော အရေးအသားကိုသုံးပြီး ဘာသာစကားတွေကိုလည်း ရောပြီးသုံးခွင့်ပြုပါ။
၁ ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ လျှာလာရှည်နေတာလဲ
၄ ကိုယ်ကိုယ်ကို သုံးသပ်ချက်
၅ ပထမဆုံး ဆောင်ရွက်ချက်
၇ အသံဖလှယ်ခြင်းကို ဘာသာပြန်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
၈ အသုံးပြုသော ဘာသာပြန်စကားလုံးများနှင့် အသံဖလှယ်စကားလုံးများ အညွှန်း
၉.၁ ဗြဟ္မဇာလသုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ
၉.၂ စာအုပ်တွေရဲ့ အကြောင်း
၉.၂.၁ ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
၉.၂.၂ အလွန်ထိရောက်စွမ်းဆောင်နိုင်သူများ၏ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇-ခု
၉.၄.၁ စားပွဲတင်တင်းနစ် ကုမ္ပဏီများ
၉.၄.၂ စားပွဲတင်တင်းနစ် ကစားသမားများ
၉.၅ Porting in enwiki Level-1 vital articles
၉.၆.၁ ယာနိုင်းမြို့နှင့် မာ့စ်မြို့
ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ လျှာလာရှည်နေတာလဲ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆောင်ရွက်ချက် အကျဉ်းချုပ်မှာ ရှင်းပြရန် များလွန်းနေသော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းထားရန် ဒီနေရာကို သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ရဲ့ နောက်ခံက ဆော့ဖ်ဝဲရ်တည်ဆောက်သူဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အတွေ့အကြုံအရ လူအများနဲ့ ပေါင်းစည်းလုပ်ရတဲ့အခါတိုင်း မှတ်တမ်းတင်မှုရှိခြင်း(documentation)ဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ချို့အပြောင်းအလဲတွေဟာ စကားလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးသာရှိပေမဲ့ (such as changingaregister bit inaprocessor)၊ သူရဲ့ အကျိုးအပြစ်သက်ရောက်မှုက အရမ်းကိုများပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ "ဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့်"ဆိုတဲ့ ရှင်းပြချက်ကို အကျယ်တဝင့် မရေးထားဘူးဆိုရင် နောက်တစ်လလောက်ကြာရင်ပဲ ဘယ်သူမှ (even the original developer) ဒါဟာ သင့်တော်မသင့်တော် မသိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ဟာ အချည်းနှီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ရင်တော့ ပိုဆိုးပေါ့။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကိုယ်ဟာကိုယ်အတွက်လည်း တအားကို အသုံးဝင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "သမိုင်းဟာအမြဲတမ်း ပြန်ပြန်လာတတ်လွန်းလို့ပါ"(History will repeat itself.)။ နောက်ထပ်ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ကို ဆက်ခံလုပ်ဆောင်သူကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတဲ့သဘောလည်း ပါပါတယ်။ ဒီ ဝီကီပီးဒီးယားလိုမျိုး နှစ်ရှည် (မာရသွန်ပါ၊ တာတိုမဟုတ်ပါဘူး)စီမံကိန်းမှာ တည်းဖြတ်သူအများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားသူအနေနဲ့ ရှေ့လူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိတဲ့အခါမှာ ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိတွေးခေါ် လှုပ်ရှားသွားနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယားကို ၂၀၀၁မှာ စတင်ချိန်မှာ ကျနော် NTU မှာကျောင်းတက်နေစဉ်မှာ ကြားရကတည်းက ပါဝင်လုပ်အားဒါနပေးဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မပါဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းတက်နေစဉ်နဲ့ အလုပ်ထဲရောက်နေချိန်တွေမှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို ပထမအချက်အလက်ပံပိုးဆိုဒ်(first information source)အနေနဲ့ အတော်ကို အသုံးများခဲ့ပါတယ်။ သူကနေ အခြေခံ အချက်အလက်ကိုရပြီးတော့မှ ပိုပြီးနက်တဲ့ သိပ္ပံနည်းပညာဂျာနယ်တို့ စာတမ်းတို့ဆီကို တစ်ဆင့်ရောက်ရှိတာပါ။ သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေမှာ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ ယုံကြည်အားထားစိတ်ချရမှုဟာ တော်တော်ကို မြင့်မားပါတယ်။ (ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ အထုပ္ပတ္တိစာတမ်းတွေမှာတော့ နည်းနည်းပိုသတိထားရပါတယ်။) ဒီလို သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ပံပိုးပေးတဲ့အတွက် အလုပ်ထဲမှာ တအားအကျိုးရှိတဲ့အတွက် Wikimedia Foundation ကို လှူဒါန်းမှုများ ပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် အထိအတွေ့ကတော့ Android မှာ မြန်မာစာ Google ကတရားဝင်ထည့်လာတဲ့အခါမှာ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို စတင်သိရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆-နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ ဒီမှာတုန်းကလည်း စိတ်ထဲမှာ ပါဝင်ကူညီမှုလုပ်မယ်လို့ တေးထားပေမဲ့ အလုပ်မအားတာတစ်ကြောင်း မြန်မာစာအရိုက် မကျွမ်းကျင်တာကတစ်ကြောင်းနဲ့ မပါဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ နောက် Windows 10 နဲ့ မြန်မာ keyboard ရလာတော့မှ ပဋ္ဌာန်းကို ပစ္စယုဒ္ဒေသရော ပစ္စယနိဒ္ဒေသရော ရိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှပဲ မြန်မာစာရိုက် ကျွမ်းကျင်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကိုတော့ ပြန်မရောက်သေးပါဘူး။
၂၀၁၉-စက်တင်ဘာမှာ ကျနော်ရဲ့ နေ့စဉ် အလုပ်အကိုင် လှုပ်ရှားမှုတွေကို အကတ်လိုက်ခွဲခြားကြည့်မိတဲ့ အခါမှာ လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်မှု (social contribution) တော်တော်လေးကို နဲနေတာကို သတိထားမိပါတယ်။ နေထိုင်မှုအခြေအနေအရရော လုပ်ငန်းသဘောအရရော အင်္ဂလိပ်စာကို အဓိကသုံးနေရတဲ့ အတွက် မြန်မာစာ အထိအတွေ့လည်း နဲနေတာကို သတိထားမိလာပါတယ်။ ဒီနှစ်ချက်ကို တန်ပြန်ဖို့ အတွက် ဘာလုပ်ရမလဲလို့ စဉ်းစားအဖြေရှာ ကြည့်တဲ့အခါမှာ လူမှုဝန်ထမ်းဘာသာပြန်မှုဟာ ကျနော့်အတွက် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ဖြေဆေးတစ်ခုလို့ မြင်လာတဲ့အတွက် ဒီလို ဘာသာပြန်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့မိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ HBR မဂ္ဂဇင်းရဲ့ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်(Management Tip of the Day) တွေထဲက တစ်ချို့ကို ဘာသာစပြန်ကြည့်ပြီး ကျနော် blogspot မှာစရေးကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီကာလ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာတော့ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးတွေကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားထဲပို့မဲ့ အလုပ်ကို ဝင်လုပ်မယ်လို့တော့ တေးထားပါတယ်။ တကယ်တော့ မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ကိုဗစ်ကာလရောက်လာတော့ ရတနသုတ်ရွတ်ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်သိချင်လို့ ဂူးဂဲလ်မှာရှာရင်းနဲ့ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားက ရတနသုတ် ပါဠိနဲ့ မြန်မာပြန်ကိုတွေ့မိပါတယ်။ ၂၀၂၀-ဧပြီ-၄ ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပိုဒ်မှာတင် ပါဠိစာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ပြင်ဆင်ချက်ကို လုပ်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်း ပြင်ဆင်မှု စဖြစ်တာကတော့ ဧပြီ-၂၉ ရောက်မှပဲ မထင်မှတ်ပဲ ကလောင်နာမည် ထားဝယ်လူကလေး(Dhawell.hlugalay)ကို ယူပြီး စာရင်းသွင်းခဲ့ပြီး၊ ကောက်ပြီးစလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲ ကို ဒီမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့ ပါဠိစာပိုဒ်တွေက စာအုပ်ထဲမှာလိုမဟုတ်ပဲ အကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာကို တွေ့လို့ပြင်မယ်လို့ စိတ်ကူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပရိတ်ကြီးစာအုပ်တွေအတိုင်း အပိုဒ်လိုက်ခွဲပြီး ရေးပြီး နမူနာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ရေးထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲ အကြောင်းလိုက်ပြန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ပြန်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က markdown နဲ့ ရေးတဲ့အခါမှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ ဒီပြဿနာတွေဟာ ပုံစံတူပဲ ဖြစ်မယ်လို့ သံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေပြီး "wikitext tag"တွေကို ရှာဖွေသုတေသနလုပ်ရပြန်ပါတယ်၊ နောက်တော့ "<poem> tag"က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးရတာကိုတွေ့တော့ သုံးဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးတွေကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားထဲပို့မဲ့ အလုပ်ကိုတော့ ပထမဆုံး ၂၀၂၀-မေ-၂၀မှာ စတင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဟာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်တည်ဆောက်သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ ရာဇဝင်ဆိုရင် ဒီလိုစနစ်မျိုးနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ အရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပြီး၊ မတော်တယော် ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် စီစစ်တွေ့ရှိပြီး ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒီရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အထဲမှာ ဂစ်တ်ဟာ အသုံးပြုမှုတအားများလာတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Git#အသုံးပြုလာမှုနှုန်းကို ကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်လဲ မေ-၂၀ မှာ ဒီ en:Git ကို Git အဖြစ် စတင် ဘာသာပြန် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသံဖလှယ်ခြင်းကို ဘာသာပြန်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
အသံဖလှယ်ခြင်းကို ဘာသာပြန်ပြီး မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားထဲကို ဆွဲထည့်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်က သံတူကြောင်းကွဲနဲ့ နီးနီးစပ်စပ်စာလုံး တော်တော်များများကို ဘာသာပြန်လာတဲ့အခါမှာ တွေ့လာတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသံထွက်ပုံကွဲကြတော့ အမည်ခေါင်းစဉ်မူကွဲတွေများလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ ဘယ်သူကမှ အမှားအမှန်ပြောလို့ မရတဲ့ အနေအထားဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ဇယားဆွဲပြီး မော်ကွန်းတင်ထားမယ်လို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် (ဂျပ်ဆင်၊ ယုဒသန်)လိုမျိုး၊ (ဝင်းဒိုး၊ ဝင်းဒိုးစ်) လိုမျိုး၊ (လိုင်းနပ်စ်၊ လင်းနပ်စ်၊ လီးနွတ်ခ်စ်)လိုမျိုး စကားလုံးတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ယှဉ်ကြည့်နိုင်အောင်၊ ဆက်စပ်မှုတွေကို နောက်ပိုင်း ဘာသာပြန်သူများ အလွယ်တကူမြင်နိုင်အောင် စုစည်းထားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသော ဘာသာပြန်စကားလုံးများနှင့် အသံဖလှယ်စကားလုံးများ အညွှန်း[ပြင်ဆင်ရန်]
open source ရင်းမြစ်မြင် - ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်
private (in contrast to open-source) ရင်းမြစ်ကွယ် - ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်
repository - ရီပိုစစ်တရီ ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်
git - ဂစ်တ် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်
hub - ဟပ်ဘ် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်
plan (as in subscription plan) - ပလန် ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်
John Medina - ဂျွန်မက်ဒီးနား ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
Luciano Passuello - လူစီယာနိုပါဆွဲလို ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
Pear Press - ပဲယားပရက်စ် ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
Scribe Publications - စ(ခ်)ရိုက်ပါဘလီကေးရှဲန်စ် ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
ebook - အီး-စာအုပ် ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
audiobook အသံထွက်စာအုပ် - ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
goodreads - ဂွတ်ဒ်ရိ(ဒ်စ်) ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
Times - တိုင်းမ်စ် ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ
(New York ကိုတော့ နူးယော့လို့ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အများသုံးနေတဲ့ "နယူးယောက်"လို့ပဲ ယူသုံးပါတယ်။) (Holy cow! This table has grown very fast. I should do something about it. Todo.)
Added "ဗြဟ္မဇာလသုတ်#ဗြဟ္မဇာလသုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ" to "https://my.wikipedia.org/wiki/ဗြဟ္မဇာလသုတ်". My main intention is to expand these sections to different articles. Initial idea isatable with pali and myanmar translation. Later, I'd like to add introduction summarizing the paragraphs plus some sections paraphrasing of the "old" Myanmar usage in the translation. အခုထိတော့ ဗြဟ္မဇာလသုတ် နိဒါန်းနဲ့ ဗြဟ္မဇာလသုတ် စူဠသီလခန်းတို့ ထည့်လို့ပြီးထားပါပြီ။ ပါဠိအပိုင်းကျတော့ ကိုယ်ကမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ ကိုးကားတဲ့ စာအုပ်နဲ့ တသွေမတိမ်းဖြစ်အောင် proofread ရတဲ့အပိုင်းက တော်တော်ကြာပြီး အမှားလဲမဖြစ်စေချင်တော့ တော်တော်ကို သတိထားရပါတယ်။ မြန်မာပြန်အပိုင်းလဲ ဒီလိုပါပဲ၊ သေသေချာချာ proofread ရတာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ပါဠိအပိုင်းလောက်တော့ မခက်ပါဘူး။ အကျဉ်းချုပ်တဲ့ အပိုင်းကတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ် နားလည်မှုရှိအောင် အရင်လုပ်ပြီးမှ ရေးရတော့ ကိုယ်အတွက်ကို တော်တော်အကျိုးရှိပါတယ်။ တည်းဖြတ်ခြင်းရဲ့ လက်ငင်းအကျိုးပေါ့။ ဗြဟ္မဇာလသုတ် စူဠသီလခန်းအပိုင်းက နည်းနည်းပိုရှည်တော့ ကျနော့်အစ်ကို အကူအညီကိုယူပြီး Google Docs ပေါ်မှာအရင် collaborated proofreading and summarizing လုပ်ပြီးမှ ဒီဝီကီထဲကို ရောက်လာခဲ့တော့ သူကိုလည်း ဒီနေရာကပဲ attribute လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဗြဟ္မဇာလသုတ် မဇ္ဈိမသီလခန်းကို ဒီနေ့ (၂၀၂၀-ဇွန်-၁၇)မှာ ဖန်တီးထည့်ဝင်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ စူဠသီလခန်းမှာလိုပဲ ကျနော့်အစ်ကို အကူအညီနဲ့ proofreading ကို Google Docs မှာ သူကတစ်ကြိမ်၊ ဒီဝီကီထဲကိုပို့တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ကတစ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ပိဋကတ်တော်စာသား၊ မြန်မာပြန်စာသားနဲ့ ထပ်တူတသွေမတိမ်းဖြစ်အောင် ကိုးကားမှာပါတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး တိုက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗြဟ္မဇာလသုတ် မဟာသီလခန်းကတော့ နောက်ထပ်လုပ်ဖို့ ပြင်ထားတဲ့ target ပါ။
ကိုယ်ဖတ်ဖူးပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုရော ဒီစာအုပ်တွေရဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုရော ဒီမြန်မာဝီကီမှာ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးဖြစ်လာလို့ပါ။ "WP:NOR" စည်းမျဉ်းအရ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်တဲ့ အကိုးအကားတွေပါဝင်ဖို့ကိုလဲ ဂရုစိုက်ရပါသေးတယ်။ တော်တော်များများကတော့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာ အကိုးအကား အပြည့်အစုံနဲ့ ရှိပြီးသားဖြစ်တာများတော့ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ့ လိုတာပါ၊ ကျနော့်ရဲ့ ဦးဆုံးအထင်ပေါ့။
မနေ့(၁၁-ဇွန်-၂၀၁၁)က ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာဆောင်းပါးကို ရေးပြီးတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (တိုက်ရိုက်ဘာသာမပြန်ပဲ အနီးစပ်ဆုံး အဓိပ္ပာယ်ကို မှီး၍ ဘာသာပြန်မည်ဆိုလျှင် "အသိဉာဏ်စူးရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုက်နာသင့်သည့် စည်းမျဉ်း ၁၂-ခု" ဟု ပြန်ဆိုနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း စာရေးဆရာ၏ ဖေါ်ပြရှင်းလင်းချက်များက ဦးနှောက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုများကို အဓိကဦးတည်ထားသဖြင့် ခေါင်းစဉ်၌ ဦးနှောက်ပါဝင်ခြင်းသည်လည်း ပိုသင့်တော်မည်ဟုယူဆပြီး ထိုခေါင်းစဉ်ကို ရွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
တစ်ကယ်တော့ ဒီစာအုပ်ကို စပြီးဆောင်းပါးရွေး ဘာသာပြန်တဲ့ အချိန်မှာ ဖတ်ဖူးတာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ စာရေးဆရာပဲရေးတဲ့ ရင်သွေးငယ်များအတွက် ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ၂၀၁၅-ဩဂုတ်လတုန်းက ဖတ်ဖူးတာပါ၊ အဲဒီတုန်းက ဒီစာအုပ်ကို ကြိုက်တဲ့အတွက် ebook တောင်ဝယ်ပြီး သိမ်းကာ အကိုးအကားပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီကိုသွားပြီးရှာကြည့်တော့ en:Brain Rulesကိုပဲတွေ့ပြီး၊ en:Brain Rules for Babyကို မတွေ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီen:Brain Rulesကိုပဲ မြန်မာဝီကီဆီ ဘာသာပြန် ပို့သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ NLBကို ဝင်ရှာကြည့်တော့ ebookကိုတွေ့ရပြီး အခုလက်ရှိ ငှားဖတ်ဖြစ်တာပါ။ ဖတ်နေဆဲပါ။ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ#အဓိကအကြောင်းအရာအပိုင်းကို အကျဉ်းနည်းနည်းဆက်ဖြည့်ပေးဖို့လဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ "WP:NOR" စည်းမျဉ်းကိုလဲ မဖေါက်ဖျက်ပဲ၊ copyright လဲမထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာလေးအထိပေါ့။
အခုနအပိုင်းကိုပြန်ကောက်ရရင် en:Brain Rulesကို ကြည့်လိုက်တော့ အချက်အလက်တွေက တအားကို နည်းပါးလွန်းနေပါတယ်၊ ပြီးတော့ en:WP:PROMOနဲ့ငြိပြီး en:Template:Advertကြီးကာနေတာတွေ့တော့၊ ဘာသာမပြန်ခင် နည်းနည်းအရင် ဝင်ရှင်းပေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံး နည်းနည်းကြီးတဲ့ တည်းဖြတ်မှု(major edit)ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၉-ဇွန်-၂၀၂၀မှာဖြစ်ပါတယ်။ (enwikiမှာ အသေးစားလေးတစ်ခုနှစ်ခုကိုတော့ ဦးငွေကိုင်နဲ့ ဂစ်တ်ဟပ်ဘ်တို့ တည်းဖြတ်စဉ်မှာ en:Ngwe Gaingနဲ့ en:Githubမှာ တည်းဖြတ်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ ၂၇-မေ-၂၀၂၀နဲ့ ၃၀-မေ-၂၀၂၀တို့မှာပါ။ သာမှန်အသေးစား အမှားပြင်ရုံလေးပါပဲ။) ၁၀-ဇွန်မှာ en:Brain Rules ရဲ့ editကို စိတ်ကျေနပ်ပြီးတော့မှ ဘာသာစပြန်ကာ ၁၁-ဇွန်-၂၀၂၀မှာ ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများဟာ မြန်မာဝီကီကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
အလွန်ထိရောက်စွမ်းဆောင်နိုင်သူများ၏ အလေ့အကျင့်ကောင်း ၇-ခု[ပြင်ဆင်ရန်]
The7Habits of Highly Effective Peopleကိုတော့ ၁၃-ဇွန်-၂၀၂၀မှာ စတင်ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ concepts နဲ့ background assumptionsတွေက ဘာသာပြန်ရတာ နဲနဲခက်တော့ နည်းနည်းတော့ အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီစာအုပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ commercial organization ရှိနေတော့၊ editor တော်တော်များများက WP:PROMO နဲ့ ငြှိမှာ စိုးရိမ်တာရယ်၊ critical editor တွေကမျက်စိထောက်ထောင့်ပြီးကြည့်ပြီး ဆွဲချတာတွေများတော့ coherent ဖြစ်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်မျိုးကို enwiki မှာ အပြည့်အဝမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ enwikiမှာ ရေးထားတဲ့ တစ်ချို့ သိပ်ပြီးမရှင်းတဲ့အချက်တွေဆိုရင် dewikiက ရောယူခဲ့ပါတယ်။ (dewiki မှာက ဒီအပိုင်းကို Englishနဲ့ ရေးထားတာပါ။) နောက်ကံကောင်းတာတစ်ချက်က ဒီစာအုပ် paper versionက လက်ထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅-နှစ်လောက်က ဝယ်ထားမိတော့ တစ်ချို့အချက်တွေကို ပြန်ဖတ်ပြီးမှ အနှစ်ချုပ်ပြန်ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်က ကျနော့်အတွက် တော်တော်ဖတ်ရလေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တစ်ခုပါ၊ မှတ်မိသလောက် အရင်က တစ်နှစ်လောက် အချိန်ယူပြီးဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ပါ။ အခုပြန်ပြီး အနှစ်ချုပ်ရေးရတော့ မေ့နေတဲ့ concepts တွေပြန်နွေးပေးသလို ဖြစ်သွားတော့ သူများမဖတ်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ဟာကိုယ်တော်တော် အကျိုးရှိသွားပါတယ်။ wiki contributionရဲ့ လောလောလတ်လတ် အကျိုးရလဒ်ပါပဲ။ ၂၅-ဇွန်-၂၀၂၀မှာတော့ ဖတ်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ Improvement is still possible though; but, not essential for now since it has reasonably complete summary of the book and related matters.
ဆရာတော် ဦးဇောတိကကို စမိသွားတာကတော့ သူ့တစိမ့်စိမ့်တွေးမယ်စာအုပ်ကို ကောက်ဖတ်မိလို့ပါပဲ။ ဦးဆုံးဖတ်ဖူးတာက ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်း စာအုပ်ပါ။ သူ့စာအုပ်တော်တော်များများကို ဖတ်တိုင်း၊ ပြန်ဖတ်တိုင်း သဘောကျမိပါတယ်။ အဲဒီလို ပြန်ဖတ်မိတဲ့အခါမှာ မြန်မာဝီကီမှာ သူ့အကြောင်းရှိလေမလားရှာကြည့်တော့ မတွေ့တဲ့အခါမှာ Google Search နဲ့ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ "Snow in the Summer"ကို Amazon မှာ listထားတာတွေ့တော့ ပိုအံ့ဩသွားပြီး၊ သူ့အကြောင်းတွေ research ဆက်လုပ်ရင်းနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ကိုယ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအားကစားတွေထဲကတစ်ခုကို ရှာကြည့်လို့ မတွေ့တာနဲ့ ဘာသာပြန်ထည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ Original Articleကလဲကြီးပြီး ရေးစရာ ဘာသာပြန်စရာ အကြောင်းလဲများတော့ အချိန်တော့ယူရအုံးမှာပါ။ Another incidental point is that this sport is taking its share into some of the precious time I have. During the COVID-19 curve-flattening period, most of the public places, such as sports hall and community centers, were closed. So, that's how I ended up editing wikipedia more during locking inside home. Now, all the sports halls and community centers are reopened again; then, wikipedia-edit and table tennis are two things I have to schedule within my off-work-hours. In any case, it's lucky that the addictive nature of wikipedia-edit has still kept me doing it, albeit at relatively slower rate.
အခုထိ ရေးထည့်ဖြစ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ အောက်မှာပြထားပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်းဟုန်ရွှမ်းရှီ ကုမ္ပဏီ (上海红双喜)
အခုထိ ရေးထည့်ဖြစ်ထားတဲ့ ကစားသမားများကတော့ အောက်မှာပြထားပါတယ်။
မာလုံ (Ma Long) (马龙)
ကျန်းကျိခဲ (Zhang Jike) (张继科)
Porting in enwiki Level-1 vital articles[ပြင်ဆင်ရန်]
Among 10 of them, only the following two are needed to be ported in.
Human history <=> ကမ္ဘာ့သမိုင်း (porting started on 25-Jul-2020; currently stub & under-construction)
The arts <=> အနုပညာ ဘာသာရပ်များ (porting started on 19-Jul-2020; currently stub & under-construction)
The remaining ones and their states are as follows:
Earth <=> ကမ္ဘာဂြိုဟ် (already in mywiki; quality is good.)
Human <=> လူသား (already in mywiki; quality is good.)
Language <=> ဘာသာစကား (already in mywiki; but still needs improvement.)
Life <=> သက်ရှိ (already in mywiki; but only stub withasingle line; will improve.)
Mathematics <=> သင်္ချာ (already in mywiki; readable to some extent; need critical improvements to cover current developments.)
Philosophy <=> သဘာဝတ္ထဗေဒ (ဝါ) ဒဿနိကဗေဒ (already in mywiki; readable to some extent; need improvements to cover as much as enwiki article covers.)
Science <=> သိပ္ပံပညာ (already in mywiki; readable to some extent; need improvements to cover as much as enwiki article covers.)
Technology <=> နည်းပညာ (already in mywiki; readable to some extent; need improvements to cover as much as enwiki article covers.)
ဘတ်တာဖလိုင်းကို စားပွဲတင်တင်းနစ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘာသာပြန်ရင်း ဒီကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ယာနိုင်းမြို့နဲ့ သူ့ရဲ့ ဥရောပရုံးခွဲရှိရာမြို့ဖြစ်တဲ့ မာ့စ်မြို့တို့ကို ဘာသာပြန်ထည့်ခဲ့ပါတယ်။
Windows 10 Wallpaper ကနေ ရှုခင်းတစ်ခုကိုကြိုက်လို့ ရင်းမြစ်ကိုရှာရင်းနဲ့ တုန်းချွမ်းခရိုင်ကို ဘာသာပြန်ဆွဲထည့် ဖြစ်သွားတယ်။ ယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ခရိုင်တစ်ခုပါ။ တော်တော်လှတဲ့ဒေသတစ်ခုပါပဲ။ Infobox မှာပါတဲ့ လော့ရှာကိုးဆိုတဲ့ပုံက သက်သေခံပါပဲ။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက တရုတ်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ချို့က ဒီဒေသ ဓာတ်ပုံတော်တော်များများနဲ့ ဆုတွေရခဲ့ချပြီး ရင်းမြစ်ကို မပြောပြပဲ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ ဒီဒေသအကြောင်း ပေါက်ကြားသွားပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူသိများကျော်ကြားလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သိပ်လှတဲ့ ရှုခင်းပုံတစ်ခုကို "enwiki picture of the day"မှာတွေ့လို့ ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံ၊ နို့ဒ်လန်းဒ်ဖင့်လ်ကဲ့၊ မော့စ်ကဲနက်စ်ဒေသမှာရှိတဲ့ ဒီရွာအကြောင်းကို ဘာသာပြန်ထည့်ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒီမှာတင် တနွယ်ငင် တစင်ပါဆိုသလို၊ သူရဲ့အပေါ်ပိုင်းဒေသအပိုင်းတွေကိုပါထည့်ဖြစ်သွားတယ်။ နို့ဒ်လန်းဒ်ကတော့ မြန်မာအနေနဲ့ကြည့်ရင် ပြည်နယ်ဒေသကြီးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ရိုက်ပဲ နော်ဝေဘာသာမှာခေါ်သလို "ဖင့်လ်ကဲ့"လို့ပဲ ခေါ်ထားလိုက်ပါတယ်။ မော့စ်ကဲနက်စ်ကတော့ ဒီပြည်နယ်ဒေသကြီးရဲ့အောက်က ခရိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နော်ဝေဘာသာမှာတော့ kommune လို့သုံးထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာတော့ municipality လို့သုံးထားတာတွေ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ မြူနီစပယ် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသခွဲလို့ပဲ ဘာသာပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့နောက်တစ်ချက်က မော့စ်ကဲနက်စ်ရဲ့ အစိုးရဗဟိုရုံးစိုက်ရာက မြို့မဟုတ်ပဲ တံငါရွာကလေးဖြစ်တဲ့ ဒီရိုင်းနဲ့ရွာ ဖြစ်နေတာပါပဲ။
All Created Pages
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:Dhawell.hlugalay&oldid=542232" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။